28% nke ndị isi ụlọ akwụkwọ sekọndrị chere na Ọrụ Worklọ Akwụkwọ bụ ... | Martech Zone
Fraịdee, June 1, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Okpu okpu na bizhack!
Jun 2, 2007 na 12:34 AM
If GHS ga-eburu nke a, ha ga-enwe uche m zuru oke. Agbanyeghị, ọ gaghị eme mgbe Maazị Lawson ka nọ.
Dị ka onye bụbu nwa akwụkwọ GHS, m ga-agbachitere Maazị Lawson. Nke mbụ, o juru m anya na ọ ka nọ ebe ahụ. O meela agadi mgbe m nọ na klas ya! Nke abuo, achorom na odighi edochi ezigbo akwukwo ma na edekwa akwukwo nyocha. N'ikwu eziokwu, akpọrọ m ya asị - enwere m ya maka Jr. & Sr. English. Agbanyeghị, anọ m n'ihu ndị ọgbọ m na kọleji n'ihi na enwere m ike ide akwụkwọ nyocha na usoro kwesịrị ekwesị, wdg. Ọ nwere ike ịbụ agadi na isiike ma ọ gaghị eji ịntanetị eme ihe ọ bụla - mana ị ga-enwe ekele maka ya na kọleji!
Usoro ọmụmụ ndị ọzọ nwere ike iji teknụzụ kụzie ihe - echeghị m na ị nwere ike iji Bekee.